Monday, 01 June, 2020 | २०७७ जेष्ठ १९ गते , सोमवार
भिजनरी लिडरशीप नहुँदा सहकारी क्षेत्रले सोचेजति प्रगति गर्न सकेन
२०७६ मंसीर १० गते , मंगलवार प्रकाशित
सहकारीलाई ३ खम्बे अर्थ नीतिको एउटा खम्बाको रुपमा विकास गर्ने बेला आयो होइन ?
मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तहले सहकारीको ऐन बनाएर लागु गर्न सक्ने भएका छन् । यसर्थ यसलाई दुईवटा पाटोमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो, केन्द्रिय कानुनसँग स्थानीय कानुनहरु बाझिएको अवस्था छ । स्थानीय तहले सहकारीलाई त्यति महत्व नदिइएको देखिन्छ । तर यसका फाइदाहरु पनि छन् । स्थानीय तहमा हुने उत्पादन, बजारीकरण तथा स्थानीय तहका जनताको आर्थिक अवस्था जस्ता विषयलाई अध्ययन गरी सोही अुनसार सहकारी ऐन लागु गर्ने हो भने समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर पनि राज्य र अन्य क्षेत्रले सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । संविधानमा नै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको ३ खम्बामध्ये एकको रुपमा उल्लेख गरिएको भएतापनि कार्यान्वयन तहमा अझ बढि जोड दिनुपर्ने हाम्रो माग छ ।
०७४ साल पछि सहकारीको यकिन तथ्यांक छैन । त्यसपछि स्थानीय तहमा सहकारी गएकाले त्यसको यकिन तथ्यांक पाईंदैन । सहकारीमार्फत आर्थिक सामाजिक वृद्धि गर्ने हो भने सहकारी आन्दोलनका निकायहरु सहकार्य गरेर राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ ।
संख्यात्मक आवद्धता र पूजीको हिसाबले सहकारी एउटा ठूलो क्षेत्र भएको छ, अबको आवश्यकता भनेको समृद्धि नै हो र यो सहकारीबाट मात्रै सम्भव हुन्छ भनिन्छ, त्यसको लागि सहकारीले कसरी काम गनुपर्छ ?
यसमा राज्यको नीति महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यले कुन किसिमको नीति लिएको छ । सहकारीलाई कसरी हेरेको छ । त्यो महत्वपूर्ण विषय रहन्छ । कानुनमा जे लेखेता पनि सहकारीलाई पैसा कमाउने र ठूलो भएपछि भाग्ने भन्ने बुझाई राज्यको छ । त्यो होइन, सहकारी भनेको आर्थिक रुपमा पहुँच नपुगेका व्यक्तिहरुको उन्नति गर्न सक्ने निर्विकल्प माध्यम हो भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ । त्यसपछि सहकारीलाई काम गर्ने बातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । सहकारीले काम गर्न खोजेका छन् । सहकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, उत्पादन लगायत विविध क्षेत्रमा काम गर्न खोजेका छन् । तर त्यो गर्न राज्यको कानुनले दिन्छ कि दिँदैन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारीको कानुन ठिक भएर मात्र भएन । सहकारीले शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य र विभिन्न किसिमिका काम गर्न पाउने बातावरण बन्यो भने सबै कुरा सम्भव छ । संविधानले दिएको महत्वलाई सार्थक बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी सहकारी अभियन्ताहरुमा पनि सहकारी क्षेत्रमा हामी पनि ठूलै भयौं भने सोचाई छ । तर सहकारीलाई अगाडि बढाउन सक्ने तत्वहरु के के हुन र किन हामीले प्राप्त गर्न सकेनौं भनेर गम्भीर रुपमा सोच्ने र छलफल गर्ने बातावरण अहिलेसम्म बनेको छैन । सहकारी ऐन र नियमावली बन्यो । तर सहकारी अभियानकै व्यक्तिहरुबीच एकमत नहुँदा सहकारी मैत्री ऐन आउन सकेन । कहिँ राम्रो, कहिँ नराम्रो, कुनै बुँदा ठिक त कुनै बुँदा बेठिक गरि आयो । यसले गर्दा अहिले अभियान पनि अलमलमा परेको छ । सरकारलाई नीति नियम बनाउन खास बाटो देखाउने भूमिका अभियानको रहन्छ । त्यो गर्न सकेको अवस्था छैन ।
ललितपुर जिल्लाको हकमा यहाँका ६ वटै स्थानीय तहसँग राम्रो सम्बन्ध छ । यस अघि जिल्ला विकास समन्वय समिति, प्रशासन तथा कृषि विकास र अन्य कार्यालयहरुसँग निरन्तर छलफल गथ्र्यौं । हाम्रो कार्यक्रममा ती कार्यालयका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाउने र उहाँहरुको कार्यक्रममा पनि हामीलाई बोलाउने काम हुन्थ्यो । कसरी कृषि, पशुपालन, उत्पादन र विकास निर्माणमा काम गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्ने गरेका थियौं भने अहिले पनि सबै स्थानीय तहसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ । त्यो सम्बन्ध विस्तार गर्ने काम अभियानको हो । यो सम्बन्धको कारणले मात्रै सहकारी अभियानको बारेमा उहाँहरुलाई बुझाउन सकिन्छ । अहिले राज्यका निकायहरुलाई बुझाउन नसकेको र अभियान पनि अलमलिएको अवस्था छ । प्रारम्भिक संस्थाहरु कस्तो ऐन वा नियम आउँछ, कार्यान्वय कसरी हुन्छ भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । सरकारले सहकारीलाई उत्पादनमा जानको लागि सीमित क्षेत्र र घेराभित्र राख्नु हुँदैन । सहकारीको दायरा फराकिलो गरिदिनुपर्छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिदिने, शिक्षा, सूचना र तालिमका प्रशस्त कार्यक्रमहरु राखिदिनुपर्छ । सहकारीमा पैसाको आवश्यकता छैन । तर हामीलाई बाटो देखाइदिनुप¥यो । हामीले काम गर्न सक्ने बातावरण र नीति नियम राज्यको तर्फबाट बनाइदिनुप¥यो । अभियानले पनि गर्न खोजेको के हो र कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वासपूर्ण खाका राज्यलाई दिनुपर्छ । जसले साँच्चिकै सहकारी चलाउर बसेका छन्, उनीहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सकने कामको शुरुवात गर्नुपर्छ । खाली एउटा लाभांशको मात्रै कुरा नगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, नेतृत्व विकास जस्ता विषयहरुमा पनि काम गर्नुपर्छ ।
सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली ०७५ आएपछि सहकारी क्षेत्र झन् तरंगित भएको जस्तो देखिन्छ नि ?
एउटा नयाँ अभ्यास गर्दा यस्तो हुनु सामान्य हो । ऐन अनुसार धेरै कुरा सहकारीले गर्न सक्ने बातावरण पनि छ । सहकारीलाई सुरक्षित गर्ने र सुशासनमा ल्याउने कुरा ऐनमा उल्लेख भएका छन् । कतिपय वुँदाहरु सहकारीलाई संकुचन गर्ने र सहकारीको पहुँचलाई कम गर्ने किसिमका छन् । यसले गर्दा सहकारी अभियान अलमलिएको अवस्था छ । २०४८ सालको ऐन एसियाकै उत्कृष्ट ऐन भनेर हामीले पढेका थियौं । अहिले मलाई त्यहि अनुभव भएको छ । ०४८ को ऐन ०७४ मात्रै परिमार्जन ग¥यौं तर ०७४ को ऐन ०७४ नसकिँदै संशोधनका आवाजहरु उठ्न थाले । यसको मतलब यहाँ केहि कमी कमजोरी छ । अभियान र राज्य दुवैको तर्फबाट कमी कमजोरी भयो होला । त्यसकारण संशोधनको आवाज उठेको छ । ऐन पश्चात् नियमावली लागु भयो । नियमावली ऐनभन्दा पनि अगाडि बढेर आयो । सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासलाई केहि बाधक हुने बुँदाहरु नियमावलीमा आयो । लाभांश वितरण गर्नु मुख्य लक्ष्य सहकारीको होइन । तर धेरै कोषहरुको व्यवस्थाले गर्दा सहकारीको लाभांश घट्ने अवस्था छ । ऐनका धेरै बुँदालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ र सहकारी क्षेत्र पनि अलमलिएको छ । जुन दिनदेखि ऐन लागु भयो, त्यहि दिन देखि ऐन परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो । त्यसमा थप अलमल भनेको सबै स्थानीय निकायमा सहकारी गएकोले पनि हो । उनीहरुले आआफ्नो तरिकाले ऐन बनाएका छन् । त्यसले पनि अलमल गराएको छ । अहिले सहकारीको एकरुपता र ऐक्यवद्धतामा नै खलल पर्छ कि भन्ने डर मलाई लागेको छ । यसमा अभियानले चनाखो भूमिका निभाउनुपर्छ ।
हिउदे अधिवेशनबाट सहकारी ऐन संशोधन हुन्छ, यसका लागि कमिटिले काम गरिराखेको छ भन्ने सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?
ऐन संशोधनको विषयमा छलफल चलिराखेको छ । कमिटिमा पनि हामीले कुरा राखेका छौं । त्यहाँ मेरो कुरा मात्रै लागु हुनु पर्छ भन्ने कमिटिको सदस्य भइसकेपछि त्यसले गति पाउन सकेको छैन । त्यसकारण सहकारी ऐन संशोधनमा धेरै राम्रा कुरा पर्छन् भनेर म विश्वस्त छैन । सरकारको पक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरु बढि नियन्त्रणकारी भूमिका राख्न खोज्ने र अभियानको तर्फबाट गएका साथीहरु नियन्त्रणबाट मुक्त हुन चाहने र स्वेच्छाचारिताका कुरा गर्ने भएकाले हामीले खोजेको जस्तो संशोधनको बुँदा नपर्न सक्छन् । तल्लो स्तरसम्म ऐनमा के–के संशोधन गर्नुपर्छ भनेर व्यापक छलफल पनि भएको छैन । ऐन आएको २ वर्षको अवधिमा हामीलाई कुन–कुन बुँदाले अप्ठ्यारो बनाएको छ भनेर प्रारम्भिक संस्थाहरुसँग छलफल भएकै छैन । ऐन कार्यान्वयन गर्ने भनेका प्रारम्भिक संस्था हुन् । उहाँहरुको लागि ऐन आएपछि उहाँहरुसँगै बसेर छलफल गर्नुपर्छ । जिल्लाजिल्लाबाट जिल्ला संघ र विषयगतसंघहरुलाई सुझाव संकलन गर्न लगाउने र सुझावको आधारमा कसरी जान सकिन्छ, त्यसको लागि विज्ञ टोली गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्दा राम्रो हुन्थ्यो ।
यति ठूलो अभियान भएर पनि आफ्नो मुद्दामा तपाईंहरु किन कमजोर देखिनु भएको ?
सबैले आआफ्नो डम्फू बजाइ राखेको अवस्था छ । कुनै व्यक्तिलाई कोही पनि माथि गएकोमा चित्त बुझेको छैन । सबैलाई माथि उचाल्नमा हात तान्नुपर्नेमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सहकारी अभियानमा आएका साथीहरु राजनीतिक रुपमा बढि प्रेरित भएको देखिन्छ । सहकारीमा पनि राजनीतिक रुपमा व्यवहार हुन थालेको छ । राजनीतिक व्यवहारले गर्दा सहकारी क्षेत्र के हो त भनेर अध्ययन गर्न पूर्वरुपमा ढोका खुल्ला नगरेको अवस्था छ । जसको नीतिगत रुपमा पहुँच छ । ती बीचमा पनि कसैको एकमत छैन । त्यहिँ असमझदारी छ । यो प्रारम्भिक स्तरको समस्या होइन, यो माथिल्लो स्तरको समस्या हो । जुन दिनसम्म सहकारीमा प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरु सहकारीकै कुर्सीमा बसेर काम गर्दैनन् यो समस्या समाधान हुँदन ।
सहकारीलाई बचत, बहुउद्देश्यीय, कृषि भनेर वर्गिकरण गरेका कारण पनि यो समस्या आएको हो कि ?
यो कुरा मैले धेरै अगाडि उठाएको थिए । सहकारीलाई बचतऋण, बहुउद्देश्यीय कृषि, अदुवा, चिया केहि पनि भन्ने होइन । सहकारी मात्रै भनेर नाम दिने र त्यसले गर्ने कार्यहरु विनियममा उल्लेख गर्ने । त्यो गर्न पाए सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । यो आवाज मैले सहकारी ऐन निर्माणको प्रक्रियादेखि उठाउँदै आएको छु । तर त्यसलाई गहन रुपमा हेरिएन । सहकारी संस्था भन्ने वित्तिकै फेडरेशन एउटा मात्र बन्ने हो । जिल्ला फेडरेशन एउटा मात्रै बन्ला, स्थानीय फेडरेशन एउटा मात्रै बन्ला, केन्द्रिय फेडरेशन र नेशनल फेडरेशन एउटा एउटा मात्रै बन्ला । त्यति बेला आफ्नो पद गुम्ने खतरा देखिएपछि यो ठिक छैन, अहिले जे छ ठिक छ भन्नेमा धेरै अभियन्ता सहमत भए । विशेषत दुइचार जना पंक्तिको स्वार्थ र असक्षमताका कारण सहकारी क्षेत्रमा यस्तो भइराखेको छ ।
सहकारी अभियानमा दुरदर्शी नेतृत्वको अभाव भएकै हो त ?
दुरदर्शी नेतृत्वको विषयमा अरुका बारेमा मैले भनिरहनु उचित भएन । जति हदसम्म अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हो त्यसमा आफ्नो पनि कमजोरी रहेको म ठान्दछु । प्रारम्भिक संस्थाहरु एक त कानुन र अर्को अभिभावकलाई हेरेर चल्दछन् । कानुन राम्रो भयो भने अभिभावकलाई पनि पछ्याउनुपर्दैन, आफैं अगाडि बढ्छन् । अलिकति अप्ठ्यारो आयो भने अभिभावकको सहारा लिन्छन् । यहाँ त अभिभावक पनि अभिभावक जस्तो भएन । कानुन पनि सोही अनुसारको आउन सकेन ।
सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदर तोक्नुको औचित्य कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
हामीले नकारात्मक कुरा मात्र मनमा राख्यौं । मनमा नकारात्मक कुरा मात्र राख्दा परिणाम पनि नकारात्मक नै दिन्छ । एक किसिमले हेर्दा सन्दर्भ व्याजदर तोक्नु ठिकै हो । केहि संस्थाले ३६ प्रतिशतसम्म व्याज लिएको हाम्रै आँखाले देखेको छ । सेवा शुल्क पनि अचाक्ली लिएको छ । त्यो एउटा पक्ष विकराल र डरलाग्दो छ । सन्दर्भ व्याजदर तोक्दैमा फेरि अन्य विकृति आउँदैन भन्ने विश्वास गर्न सकिने आधार के छ ? विकृति आइसक्यो, हामीले देखिसक्यौं, व्याजदर १६ प्रतिशत लिने र बाँकी केके कतिकति लिने ? सहकारी स्वनियमनमा चल्ने संस्था हो । सहकारीले व्याज आफैं तोक्न पाउनुपर्छ, दायित्व फरफारक गर्न पाउनु र हिसाबकिताबलाई व्यवस्थित राख्नु पर्छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट चल्ने संस्था हो सहकारी । प्रजातन्त्रको पहिलो पाइला सहकारी हो । सहकारीले गर्ने हरेक गतिविधि प्रजातन्त्रमूलक र समतामूलक हुन्छ । सहकारीले आफ्नो नियन्त्रण आफैं गर्ने हो । यो बाटोमा हामी जानुपर्ने ठाउँमा राज्य नियन्त्रित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी मूल्यमान्यतामा आँच पुगेको छ भन्ने लाग्छ । सहकारीलाई चौरको सिमाना तोकिदिनु पर्छ र त्यस भित्र खेल्न पाउनुपर्छ । सामान्य रुपमा हेर्दा व्याजदर तोक्नु ठिकै हो । जुन व्याजदर तोकिएको छ, त्यो कानुन सम्मत छ कि छैन ? ऐनमा व्याजदर तोक्ने कुरा छैन नियमावलीमा आयो । यसले पार्न सक्ने प्रभाव के हो ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ? अरु देशमा पनि व्याजदर राज्य नियन्त्रित छ कि, यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । सहकारीको व्याजदर तोक्ने भनेको स्वयं त्यहि संस्थाले हो । उसको सञ्चालन पूँजी, सञ्चालन खर्च, सदस्यलाई दिने लाभांर्श, बचतकर्ताको आवश्यकता कति छ, कहाँ बसेर कारोबार गरेको छ, ती सबै कुराहरु हेनुपर्छ । यो विषयमा हामीले ललितपुरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ग¥यौं र सन्दर्भ व्याजदर उचित छैन र नियमभन्दा बाहिर छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । व्याजदर घटाउँदै जानुपर्छ र त्यसको लागि राज्यले बातावरण मिलाइदिनुपर्छ । सहकारीको आयकर घट्यो, यसले सदस्यको गोजीमा बढि पैसा जाने बातावरण बनेको छ । यसले सहकारीमा विश्वास बढ्छ । तर अहिले पाएको सुविधा अर्को वर्ष नपाउने भएपछि सहकारीप्रति सदस्यको विकर्षण हुन्छ ।
व्याजदर पुनरावलोकन होला भन्ने आशामा धेरै सहकारीकर्मी छन् नि ?
म महासंघको सञ्चालक र संघको अध्यक्षको हिसाबले पनि संघर्ष समितिमा बसेर काम गरिराखेको छु । सन्दर्भ व्याजदर तोकिनु हुँदैन, यो नियमसंगत छैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त विपरित पनि छ । सरकारले व्याजदर लागु गरेर सहकारीलाई छुँदा कत्तिको झड्का दिन्छ त भनेर हेर्न खोजेको हो । झट्काको आधारमा भोल्टेजहरु थप्दै जाने रणनीति हुनसक्छ । महासंघमा एउटा सुप्रिम बडी छ । व्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा महासंघ पुगेको छ । सरकारलाई पनि यो विषयमा बुझाउँछौं र केहि समयपछि सहजता हुने विश्वास गरेका छौं ।
०७७ भित्र एक संस्था एक सदस्य, एकिकरण, कार्यक्षेत्र जस्ता विषयमा सहकारीकर्मीहरु चिन्तित छन् नि ?
एकिकरणको विषयमा मेरो पन स्पष्ट धारणा छ । एकिकरण हुनुपर्छ । तर बाध्यकारी हिसाबले हुनुहुँदैन । ललितपुरमा २ सयको संख्यामा महिला सहकारी छन् । त्यसमध्ये तीनचारवटा संस्थाले फोन गरिसके । हामी छुट्टै तरिकाले स्थापना भएका हौं, हाम्रो छुट्ट समुह छ र आफ्नै विशेषता छ, हामी एकिकरण गर्न सक्दैनौ, दर्ता खारेज गर्ने प्रक्रिया कसरी होला बताइदिनुस् भनेर भनिराखेका छन् । अर्कोतर्फ आफ्नै ढंगले चलेका सहकारीहरु, सदस्यता, पूँजी र कारोबारका हिसाबले राम्रा छन् तर कानुन त पालना गर्नुप¥यो नि भन्ने कुराले आतंकित छन् । एकिकरण गरेपछि हुने फाइदा सरकारले देखाइदिनुपर्छ । एकिकरणमार्फत ठूलो संस्था हुँदा राम्रो हुन्छ । गुणस्तरीय सेवा सदस्यलाई दिन सकिन्छ । तर जबर्जस्ती एकिकरण गर्नु भनेको जबर्जस्ती विवाह गराउनुजस्तै हो ।
एक संस्था एक सदस्य विस्तारै लागु हुन्छ । बचत ऋणको संस्थामा किन धेरै ठाउँमा हुनुप¥यो । एउटै संस्थाले सबै सेवा दिन सक्छ भने सदस्य एउटैमा बस्न राजी छन् । अहिले एउटै संस्थाले हरेक सुविधा दिन नसकेका कारणले धेरै संस्थामा सदस्य बन्नु परेको हो । प्रकृतिको हिसाबले विभिन्न प्रकृतिका संस्थामा सदस्यता लिन पाउँछन् । यो लागु गर्न सकिन्छ तर सरकारले तोकेको समयसीमा भित्र यो सम्भावना देखिँदैन । यसलाई विस्तारै लागु गर्न सकिन्छ ।
जिल्ला सहकारी संघ ललितपुर अहिले के गर्दैछ ?
जिल्ला सहकारी संघ ललितपुर सहकारी अभियानमा अत्यन्तै क्रियाशील संघको रुपमा चिनिएकै छ । हामीले त्यसै अनुरुपका क्रियाकलाप सदस्यहरुमाझ सञ्चालन गरेका छौं । संघले मुख्यतः ४/५ वटा कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पहिलो हो, शिक्षा तथा तालिम । संघले आफ्नै तालिम हलबाट निरन्तर सहकारी शिक्षा तथा तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेको छ । त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा विभिन्न समयमा आउने सूचना, परिपत्र, ऐन नियम, कानुन, सञ्चालन विधि र प्रक्रियाका बारेमा सरोकारवाला निकायहरुबाट दिइएका निर्देशनहरु पनि हामीले तुरुन्तै सहकारी संघसंस्थाहरुमा सम्प्रेषण गर्ने गरेका छौं । त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताका बारेमा अन्तक्र्रिया पनि गर्ने गरेका छौं ।
भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा संघको स्वामित्वमा रहेको जमीनमा नै जिल्ला संघको भवन निर्माणको काम धेरै समय अघि शुरु भएको छ । तर पनि यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अहिले सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो । दूतावावासको आर्थिक सहयोग, संघको आर्थिक सहभागिता र जिल्ला समन्वय समितिको प्राविधिक र प्रशासनिक समन्वयमा यो बन्न लागेको हो । विभिन्न सरकारी प्रक्रियाका प्राविधिक पाटा, नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय अन्तरसम्बन्ध जस्ता विविध कारणले निर्माणमा ढिलाई भइरहेको भएतापनि हाल आएर काम द्रूत गतिमा अघि बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो सम्पन्न हुने हाम्रो आशा छ ।
त्यसै गरी, संघले अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र यूएनडिपीले संयुक्त रुपमा विभिन्न ६ जिल्लामा आयोजना गरेको सहकारी बजार विकास कार्यक्रम (सिएमडिपी) अन्तर्गत यस ललितपुर जिल्लामा १२ वटा सहकारी संस्था छनौट गरी तिनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम दिइसकेका छौं । ती मध्ये ६ वटा फलफूल संकलन केन्द्र स्थापना भइसकेको छ भने थप केन्द्र भविष्यमा निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । त्यसैगरी पालिका स्तरीय बजार निर्माण गर्ने क्रममा बागमती गाउँपालिकाको तीनपानेमा बजार निर्माणको काम शुरु भएको छ । राष्ट्रिय बजार निर्माणको लागि पनि महालक्ष्मी नगरपालिकामा रहेको करिब ११ रोपनी सरकारी जग्गा प्राप्तिका विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन नगरपालिकासँग सहकार्य भइरहेको छ ।
२०७४ को ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम सहकारी संस्थाहरुको प्रवद्र्धनको लागि सम्बन्धित संस्थामा नै गएर उसको अवस्था बुझ्ने, अनुगमन र निरीक्षण गर्ने र त्यसमा देखिएका कमीकमजोरीहरुलाई सुधार गर्नका लागि यस वर्ष हामीले एउटा कार्यक्रम राखेका छौं । सहकारी विभागसँग पनि यस कार्यक्रममा सहकार्यका लागि हामीले भनेका छौं । यस वर्ष हामी १६ वटा संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण गर्छौं । ती संस्थामा गएर उनीहरुको नीतिनियम कस्तो छ, सञ्चालन विधि र प्रक्रिया कसरी चलिरहेको छ भनेर हेर्छौं । त्यसैगरी प्रकाशनका कार्यलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौं भने बेलाबेलामा आइपर्ने अन्य गतिविधि पनि गर्दै आएका छौं ।
सदस्य संस्थाहरुलाई सबलीकरणको लागि संघले कस्तो भूमिका खेल्दै आएको छ ?
समग्र रुपमा हामीले सहकारी संस्थाहरुलाई चौतर्फी रुपमा सबल बनाउने कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । त्यसका साथै कहिलेकाँहि सानो रकमले पनि संस्थाहरु अप्ठेरोमा परेका अवस्था हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कानुनतः एउटा सहकारीले अर्को सहकारीलाई सहयोग गर्न मिल्ने प्रावधान छैन । सम्बन्ध पनि नहुने अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थालाई चिर्न जिल्ला सहकारी संघले कोअर्डिनेशन गरेर अन्तरलगानी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । अहिले ठूलो परिमाणमा गर्न नसके पनि ससानो रकम अन्तरलगानी मार्फत समस्या परेका बेला संस्थाहरुलाई त्यस कार्यक्रममार्फत दिने गरेका छौं ।
जिल्लाको समग्र सहकारी अभियान चित्तबुझ्दो ढंगले अगाडि बढेको छ त ?
जिल्लामा भएका सम्पूर्ण सहकारी संस्था स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुँदाको संख्या ११८८ रहेको थियो । त्यस पछि पनि स्थानीय तहहरुले आआफ्नै ऐननियम बनाएर संस्था दर्ता दिएको अवस्था छ ।
भौगोलिक अवस्थाका आधारमा ललितपुरका सहकारीहरुलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । ललितपुर राजधानी उपत्यकाभित्र पर्ने भएतापनि यसका ३ गाउँपालिकाहरु कोञ्ज्योस्योम, वागमती र महाँकाल अत्यन्तै विकट क्षेत्रमा पर्छन् । ती क्षेत्रमा कृषि, दुग्ध र चियाका सहकारी रहेका छन् । मध्य क्षेत्र अथवा काँठमा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय र कृषि सहकारीको बाहुल्यता रहेको छ भने शहरी क्षेत्रमा विशेष गरेर बचत तथा ऋणको बाहुल्यता छ । ११८८ सहकारी मध्ये पनि एकडेढ सय सहकारी संस्था अद्यावधिक नभएको अवस्था छ । अरु सहकारी संस्था क्रियाशील रहेका छन् । अत्यन्त राम्रोसँग समुदायमा आधारित रहेर चलेका संस्था यहाँ छन् । त्यसो भन्दैमा शहरी क्षेत्रमा वा देशभर भएका सहकारीका विभिन्न समस्या यहाँ हुँदै नभएको भन्ने होइन । तर हामीले ती विषयहरुलाई हटाउने प्रयत्न गरेका छौं । सकेसम्म संस्थाहरुलाई सुशासनमा राख्न प्रयत्न गरिराखेका छौं । सहकारी संस्थाका सदस्यहरुको आर्थिक र सामाजिक उन्नतिका लागि सहकारी मूल्यमान्यता र सिद्धान्तभित्र रहेर संस्थाहरु चल्न सकुन् भनेर हामीले विभिन्न चरणका कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । अन्तक्र्रिया गर्ने, संस्थामा नै गएर सुझाव दिने गरेका छौं । उहाँहरुलाई कानुनी प्राविधिक रुपमा आवश्यक पर्दा वा तरलता अभाव हुँदा सहयोग गर्ने काम हामी गर्दछौं । त्यसैले जिल्लाको सहकारी अभियानमा समस्या नै नभएको त नभनौं तर विकराल रुपमा कुनै समस्या छैन । समुदायको विश्वास दरिलो छ । त्यही भएर नै ३ लाख ४१ हजार व्यक्ति सहकारीमा आवद्ध भएको २०७४ असार मसान्तको रेकर्ड छ । करिब ५५ अर्बको कारोबार भएको अवस्था छ । भौगोलिक र जनसंख्याको हिसाबले जिल्लामा सहकारी संस्थाको पहुँच राम्रोसँग विस्तार भएको छ । अर्कोतर्फ सहकारी अभियानका महत्वपूर्ण निकायहरु यसै जिल्लामा रहेका छन् ।
मेगा ड्रिम बहुउद्देश्यीयद्वारा ५० परिवारलाई खाद्यान्न वितरण
विपद्को बेलामा पनि सदस्यको निरन्तर सेवामा सहकाली साकोस
रमजानमा लकडाउनमा परेका गरीब श्रमिक परिबारलाई राहत बितरण
मुस्लिम संगठन नेपाल द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी :रमजान र इदुलफित्र मुबारक !
नेपालमाथि भारतीय हस्तक्षेपको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा घोर बिरोध
कपिलबस्तु बिजय नगरका गाउँ पालिकाका अध्यक्षद्वारा ४३ नेपाली नागरिकको उद्धार
मदरसालाई अनुदान बढाउन मुस्लिम अगुहरुको सरकारसँग माग
पहिलो चरणमा राहत नपाएका परिवारले कहिले पाउछन् ? कृष्णनगरका गरीब परिवार
अबदेखि ग्रीन, एल्लो र रेड जोनका आधारमा लक डाउन चल्ने
सत्तारुढ दल बिभाजन हुने सन्देह, दल बिभाजन गर्ने अध्यादेश खुकुलो पार्ने प्रस्ताब क्याबिनेटबाट पारित
सहुलियत र अनुदान दिए सहकारी उत्पादनशील क्षेत्रमा जान सक्छन्